Ciidamo katirsan daowlda oo dil, dhaawac iyo boob u geestay barakacayaasha dagmada wadajir | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Ciidamo katirsan daowlda oo dil, dhaawac iyo boob u geestay barakacayaasha...
Ciidamo katirsan daowlda oo dil, dhaawac iyo boob u geestay barakacayaasha dagmada wadajir
Aqriso Warsom.com hooyga runta iyo xaqiidada warka soomaaliyaCiidamo ka tirsan Dowladda KMG ee Soomaaliya ayaa waxa ay dad rayid ah ku rasaaseeyeen Kaamka Rajo degmada wadajir ee Magaalada Muqdisho.
Kaamka Rajo ayaa xilliga Ciidamada Dowladda ay rasaasta ku furayeen waxaa ka socoday howlo cuno qeybin ah oo dadkaasi raashin loogu qeybinayey.
Warku wuxuu intaa ku darayaa in dadka safaf dheer dheer la galiyey kaddibna la sheegay in buuq iyo sawaxan ay halkaa ka sameeyeen, islamarkaana halkaasi lagu rasaaseeyey.
Mid ka mid ah dadkii ku sugnaa halka ay rabshadaasi ka dhacaday ee Kaamka Rajyo ayaa warsom u sheegay in labo ruux ay halkaasi ku geeriyoodeen, halka sadex kalena ay dhaawacyo soo gaareen.
intaas kadib waxaa xorada kadacay boob ay raashinka garkaarka ay sameeyeen ciidamada dawlada iyo dad shacab a ha a oo meesha kadhawaa
“Dadkii masaakiinta ahaa ee raashinka la siinaayey ayaa lagu furay rasaas, waxaana ku furay ciidanka amniga oo meesha amnigeeda sugayey sadex qofood ayaa ku dhaawacantay labana way dhimatay, inta kalana way kala carareen kad ibna boob ayaa bilaawday w” sidaa waxaa yiri mid ka mid ah dadka ku sugnaa Kaamka Rajo oo warsom.com hadlay.
Si kastaba xaalku ha ahaadee goobaha cunta qeybinta laga sameeyo ee gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa inta badan ka dhaca raasaaseyn ay sameeyaan ciidamada ilaalada ka ah goobahaasi taasi oo sababta khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Aqriso Warsom.com hooyga runta iyo xaqiidada warka soomaaliya
Previous articleDagaal xoogan oo kadhacay manta ka dhacay gobolka gado
Next articleMaamulka galmudug oo xalad dag dag ku soorogag deeganad ay maamulaan